PESTEL Analysis — Balance Professional Services
လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်တယ်၊ ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကြိုးစားတယ်၊ ဈေးကွက်လည်းရထားတယ်၊ ဖောက်သည်တွေလည်းကျေနပ်တယ်၊ ဒါဆိုရင် ရေရှည်တည်တံ့အောင်မြင်ဖို့လုံလောက်ပြီလား? မလုံလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အထက်ကပြောတဲ့အရာတွေဟာ သင့်လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပဲရှိပြီး သင်လုပ်ရင်လုပ်သလောက် ခရီးရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့တင်လုံလောက်နေရင်တော့ ဆင့်ပွားစနစ်နဲ့ရောင်းချနေတဲ့ Multi-level Marketing ကုမ္ပဏီတွေ ပြုတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ဘာပဲပြောပြော သူ့အရောင်းသမားတွေနဲ့သူ၊ သူမိတ်နဲ့သူ တော့အဆင်ပြေနေတာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက ပေါ်လစီထုတ်ပြီး ကောက်ပိတ်ပစ်လိုက်တော့ ပြာယာခတ်သွားတာပဲလေ။ ဒီလိုပါပဲ သင့်လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာမရှိပဲ လုပ်ငန်းအပေါ်သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲ့တာတွေက
• Political (နိုင်ငံရေး)
• Economic (စီးပွားရေး)
• Social (လူမှုရး)
• Technological (နည်းပညာ)
• Environmental (သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်)
• Legal factors (တရားဥပေဒေရးရာ)
အစရှိတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို PESTEL လို့ အတိုခေါ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အခြေပြုပြီး အနာဂတ်မှာကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ် ဘာတွေသက်ရောက်လာနိုင်သလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းကို PESTEL Analysis လို့ခေါ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် PESTEL Analysis ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန် (သို့မဟုတ်) ဈေးကွက်အသစ်ထဲသို့ ဝင်တဲ့အချိန်မှာ သုံးကြပါတယ်။
အောက်မှာတော့ တစ်ခုခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ၊ အသုံးဝင်ပုံတွေ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
(၁) Political (နိုင်ငံရေးအခြေအနေ)
ဒါကတော့ အစိုးရနှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေက ကိုယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် ဘယ်လောက်အကျိုးသက်ရောက်မှု ၊ လွှမ်းမိုးမှုရှိလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအချက်တွေလဲဆိုတော့
• လက်ရှိအစိုးရအခြေအနေ တည်ငြိမ်မှုရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း
• အစိုးရ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ
• အခွန်ပေါ်လစီတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေ
• အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေး ဘက်ဂျက် အခြေအနေတွေ
• ကုန်သွယ်မှု တင်းကြပ်ခြင်း/ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေ
• သွင်းကုန်-ပို့ကုန် စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေ)
အစရှိတဲ့အချက်တွေကနေ ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက်လာနိုင်မှုရှိမရှိကို လေ့လာပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
ထို့အပြင် အစိုးရကနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးတွေ၊ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ၊ အဆောက်အဦးတွေ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရးတွေနဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကပါ ကိုယ့်အပေါ်သက်ရောက်လာနိုင်မှုရှိမရှိထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ အထက်မှာပြောထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို လုပ်ငန်းတစ်ခုမစခင်၊ ဈေးကွက်အသစ်ထဲသို့မဝင်ရောက်ခင် ခန့်မှန်းတွက်ဆထားရပါမယ်။
(၂) Economic (နိုင်ငံစီးပွားရေးအခြေအနေ)
ဒါကတော့သိသာပါတယ်၊ ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုယ် ဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်လုပ် နိုင်ငံစီးပွားရေး ကမောက်ကမဖြစ်နေရင်တော့ ကိုယ်လည်း မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်နဲ့ကိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့
• နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းတွေ
• ချေးငွေရနိုင်၊ မရနိုင်တွေ
စတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်ကို တိုက်ရိုက်(ဒါမှမဟုတ်) သွယ်ဝိုက်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာရပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေက ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Demand & Supply (ဝယ်လိုအား နှင့် ရောင်းလိုအား) တွေကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအပေါ် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်မှုက အပြောင်းအလဲဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။
(၃) Social (လူမှုရေးအခြေအနေများ)
လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကတော့ များပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့
• မွေးနှုန်း၊ သေနှုန်း
• လူတွေရဲ့ ခန့်မှန်း သက်တမ်းနှုန်းထား
• အသက်အပိုင်းခြားအလိုက် လူဦးရေ
• စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုအလိုက် လူဦးရေ
• လူတွေရဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေ
• ဝယ်ယူမှုအလေ့အထတွေ (ဘာတွေတတ်လဲ၊ ဘာတွေကြိုက်ကြလဲ)
• ငွေစုဆောင်းခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အားလပ်ချိန်၊ နိုင်ငံခြားသား၊ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး
အထက်ပါ အချက်အလက်တွေက အထူးသဖြင့် ဖောက်သည်အသစ်/ ဈေးကွက်အသစ်တွေရှာဖွေရာတွင် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်း ဒေသခံအလုပ်သမားအင်အားနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားခံယူချက်တွေ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကိုလည်း အကြမ်းအားဖြင့် သိမြင်နိုင်ပါတယ်။
(၄) Technological (နည်းပညာ)
နည်းပညာရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကလည်း ခုခေတ်ကြီးမှာ သိသာမြင်သာရှိပါတယ်။ ဥပမာ။ ။နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် မြန်မာဗီဒီယိုခွေတွေ၊ အခြားနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကို အွန်လိုင်းကတဆင့် ဖုန်းနဲ့ကြည့်လို့ရလာတော့ ခွေအငှားဆိုင်တွေဟာ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သွားပါပြီ။ စာအုပ်အငှားဆိုင်တွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကတ်ဆက်ခွေတွေဆိုလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ အဲ့တော့ ဒီလို နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကြောင့် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကို ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်မရှိနိုင် ဘယ်အချက်တွေကို သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်သလဲ?
• တီထွင်ဖန်တီးလာသော နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေ
• လူတွေရဲ့ နည်းပညာပိုင်းအသိအမြင်တွေဖွံ့ဖြိုးလာမှု (ဥပမာ - လူတိုင်း Facebook, WeChat သုံးတတ်လာတာ)
• နည်းပညာအသစ်တွေကို လက်လှမ်းမှီလာခြင်း၊ တတ်နိုင်လာခြင်း (ဥပမာ - ဒီနေ့ခေတ်မှာ စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ Function စုံတဲ့ Smart Phone တွေကိုင်နိုင်နေပါပြီ)
• အင်တာနက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်း
• နည်းပညာက လူတွေကိုအစားထိုးလာခြင်း (ဥပမာ- စက်မှုလယ်ယာဖြစ်လာတော့ ကောက်စိုက်သမတွေနဲ့ ကောက်ရိတ်တဲ့သူတွေ အရင်လောက် မလိုအပ်တော့သလိုပေါ့)
• တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးဆက်သွယ်ရာမှာ၊ လူအများဆီသို့ သတင်းဖြန့်ဝေရာမှာ လွယ်ကူလာခြင်း (ဥပမာ - Facebook မှာတစ်ခုခု ဖွလိုက်လို့ကတော့ ချက်ချင်းပြန့်သွားသာတာကြည့်ပါ)
အထက်ပါအချက်အလက်တွေကတော့ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍထဲသို့ ဝင်ရန်မဝင်ရန်၊ Product အသစ်တခုထုတ်သင့်မထုတ်သင့် အစရှိတဲ့အရာတွေကို ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ဒါတွေကိုသိခြင်းအားဖြင့်လည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုအဆင့်မြင့် တင်နိုင်ပြီး သူများနဲ့အမြဲရင်ဘောင်တန်းနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Distribution (ဖြန့်ချီရေး) ၊ Manufacturing (ထုတ်လုပ်ခြင်း) နဲ့ Logistics (ပို့ဆောင်ရေး) ကဏ္ဍတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းအသစ်တွေပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ - ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေက Online ကတစ်ဆင့် Direct to Customer (ဖောက်သည်ဆီတိုက်ရိုက်) စျေးရောင်းနေချိန်မှာ ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲ?)
(၅) Environmental (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်)
ဒါကတော့ ကိုယ်အစိုးမရတဲ့ သဘာဝတရားကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိရပါတယ်။
• ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေ (ဥပမာ - ပူလွန်း၊ အေးလွန်း၊ မိုးစိုလွန်း)
• သဘာဝဘေးရန်၊ ဘေးဒဏ်တွေ
• ရေနဲ့လေ ညစ်ညမ်းခြင်းတွေ
• အစိုးရကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်သော ပေါ်လစီတွေ (ဥပမာ - ၂၀၀၀ ကျော်လောက်က ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းလို့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အစား ဂရိတ်မြင့် ပလက်စတစ်အိတ်ကို ပြောင်းသုံးပါဆိုလို့ ပြောင်းခဲ့ရတာ မှတ်မိသေးလားမသိ)
• Recycling (ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း) (ဥပမာ - အခုဆို ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ ဖော့အိတ်တွေနဲ့စျေးဝယ်ဖို့ မြို့ကြီးတွေမှာ ပညာပေးဆိုင်းဘုတ်တွေ တွေ့နေရပါပြီ)
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်တွေက အထူးသဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတွေ၊ ရာသီပေါ်သီးနှံတွေပေါ်မှီခိုရတဲ့ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ၊ အာမခံလုပ်ငန်းတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်တာကတော့ သယာဝဘေးဒဏ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၆) Legal (တရားဥပေဒေရးရာ)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဟာ ဘယ်အရာတွေက မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်၊ ဘယ်အရာတွေက တရားမဝင်ဘူး ဆိုတာတွေကို ဂဃဏန သိထားရပါမယ်။ ရှိပြီးသား ဥပဒေတွေ၊ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့် စီးပွားရေးကိုဘယ်လိုထိရောက်စေနိုင်လဲ၊ ဘောင်ထဲကနေဘာတွေလုပ်လို့ရနိုင်သလဲ ဆိုတာသိထားရပါမယ်။ ဥပမာ - ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အရက်၊ဘီယာကို တီဗွီ၊ ဂျာနယ်/မဂ္ဂဇင်း၊ ကြော်ငြာဘေဘုတ် တွေမှာ ကြော်ငြာခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ဥပဒေမချိုးဖောက်ပဲ ကိုယ့်တံဆိပ်ကို ဘယ်လိုကြော်ငြာကြသလဲ? ဘောလုံးအသင်းကို စပွန်ဆာပေး၊ ဘောလုံးသမားတွေပုံကိုယူပြီး မြန်မာ့ဘောလုံးအားပေးကြပါဆိုပြီး ညှပ်ကြော်ငြာရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြော်ငြာလည်းဆိုတာတော့ လူတိုင်းသိသလို ထိရောက်မှုလည်းရှိပါတယ်။ အချို့ ယမကာ တံဆိပ်တွေကြတော့ ဘေးထွက် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို တံဆိပ်တူ နာမည်တူထုတ် (ဥပမာ - ရေသန့်)၊ ပြီးတော့မှ ရေသန့်ကြော်ငြာဆိုပြီး တင်လိုက်တယ်။ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ ဥပဒေနဲ့အညီပဲလေ။ ဒါကြောင့်ပြောတာပါ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ သိထားပါဆိုတာ။ အဲ့တော့ နောက်ထပ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာရဦးမလဲ။
• အလုပ်သမား ဥပဒေတွေ (ဥပမာ - အလုပ်ချိန်သက်မှတ်ချက်တွေ၊ အခြေခံလစာတိုးလိုက်လို့ ရိုက်ခတ်သွားတဲ့ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေ၊ ဖိနပ်စက်ရုံတွေ)
• စီးပွားရေး ဥပဒေတွေ
• ကျန်းမာရေး နှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေ (ဥပမာ - Convenience Store တွေမှာ ညနေ ၆ နာရီနောက်ပိုင်း အရက်ဘီယာမရောင်းခိုင်းတော့တာတွေ)
• ကုန်သွယ်ရေး ဥပဒေတွေ
• လုပ်ငန်း/ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ဥပဒေတွေ
• အထူးကုန်စည်တွေနဲ့ပတ်သက်တွဲ ဥပဒေတွေ
အစရှိတာတွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် စျေးကွက်အသစ်ထဲကိုဝင်မယ့် International Business လုပ်ငန်းကြီးတွေဆို ပိုပြီးအရးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၊ ဒေသတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ ဥပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာ မတူညီတဲ့အတွက် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်တော့မယ်ဆို အဲဒါတွေကို မဖြစ်မနေလေ့လာရပါတယ်။ ဥပမာ - လွန်ခဲ့နှစ်အနည်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်လာတဲ့ Grab ကား/သုံးဘီး အငှားဝန်ဆောင်မှုဆိုလျှင် သူများနိုင်ငံမှာဆို ကိုယ်ပိုင်အိမ်စီးကားပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံလည်းရောက်ရော နံပါတ်အနက်တွေက စီးပွားဖြစ်ခရီးသည်တင်ဆောင်ခွင့်မရှိဆိုတဲ့ ဥပဒေကြောင့် နံပါတ်အနီ Taxi ကားတွေ၊ အထူးနံပါတ်နဲ့ သုံးဘီးကားလေးတွေဘက်ကို ဦးလှည့်ရပါတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် ဒီ PESTEL Analysis ဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ လေ့လာမှုမျိုးပါ။ ဒီလိုလေ့လာထားမှာသာ ကိုယ့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေ လုပ်ငန်းဆီရောက်လာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။